Casrigii ugu dambeeyey:TV kula hadlaya kuna daawanaya adigoo daawanaya – SBC
Casrigii ugu dambeeyey:TV kula hadlaya kuna daawanaya adigoo daawanaya
Posted by editor on May 16, 2012 Comments
Horumarka dhanka technology-da dunidu ku talaabsanayso waagii baryaba ayaa haatan figtii ugu horeysay maraya iyadoo ay sii kordhayaan sancada dhanka qalabka electronic-ga, iyadoo inta badan dhagaheena ay buuxiyeen farsamooyin casri ah oo dhanka technology-da sida RoBot u shaqeynaya sida bini’aadamka oo cunto karinaya ama adeegaya, suxuunta duusha iyo waliba farsamooyinka la isku yiraahdo Nano technology.
Hadaba himilada aadunuhu ugu jiro hiigsashada farsamo technology oo casri ah ayaan aheyn mid hurdo iyo hooyaad looga jiro, balse waxaa muuqata in daal iyo dadaal dheeraad ah aadanuhu ku bixinayo farsamooyin casri ah oo maalin kasta la soo bandhigayo.
Shirkada caanka ah ee farsameysa qalabka Electornic-da ee laga lagu magacaabo SAMSUNG saldhigeeduna yahay wadanka Korea ayaa soo bandhigtey Telefishin cusub oo loogu magac darey Tv-yada Jiilka cusub (New Generation Tv), waxaana uu u dhigmaa taleefoonada Garaadka leh ama Smart phones ee ku shaqeeya taabashada (Touch Screen).
Tv-gan cusub ayaa la sheekaysan kartaa adigoo ku maamuli kara gacan taag halkii aad u adeegsan laheyd remote control adigoo badali kara hadba Chanel-ka aad doonayso, intaasi kaliya kuma koobnee waxaad la hadli kartaa Tv-gan hadii aad u baahan tahay inaad cod maamulaha (volume control) aad ka gaabin karto ama ka dheereyn karto adigoo afka uun kala hadlaya, balse waxaa dhici karta in qofku adeegsado xarfo aanu fahmi karin Tv-gu taasi oo daal iyo qaylo uun kuu keenaysa.
Waa gacantaada kaga caano maal maxaad ku fali remote control
TV-gan waxaa ku rakiban Kaamiro muuqal sare (High Definition Camera ama HD Camera) taasi oo loogu tala galay in ay qaado sawiro aad u qurux badan waxaana ay awood u siinaysaa Tv-ga in ay abaarto wajiga qofka ama waxa loo yaqaan Face recognition, qalab codka kala garanaya, laba codbaahiye oo mataano ah, Tv-gan ayaa qiime ahaan wuxuu ku kacayaa 5 kun oo doolarka Mareykanka ah.
Shirkada Samsung waxay sheegtey in Tv-gan uu sidoo kale ku wanaagsan yahay in lagu wada sheekaysan karo iyadoo la adeegsanayo aaladaha Internet-ka ee maqalka iyo muuqaalka xambaarsan sida Skype taasi oo aad maqal iyo muuqaal kula sheekaysan karto qofka kula hadlaya.
Laakiin mushkilada Tv-gan uu xambaarsan yahay ee laga qayliyey ayaa ah in uu duubayo muuqaalka qofka daawada ah, waxa uu daawadey, inta jeer uu daawaday, waxyaabaha uu daawaday & amarada uu siiyey, arimahaasi oo dadku ka qabaan walaac in xogtooda gaarka ah (Personal Privacy) ay shirkada Samsung u gudubto qaybo sadexaad (Third parties).
Shakiga iyo walaaca kale ee Tv-gan laga qabo ayaa ah in burcad Internet-ka ee Hackers loo yaqaan ay jabsan karaan xogta qoyskaaga iyagoo ka helaya macluumaadka uu Tv-gaasi keydiyey taasi oo u sahlaya Mooryaanka Internet-ka inay si fudud ku dhexgali karaan Tv-gaasi date-da uu kaydiyey.
Shirkada Samsung oo laga leeyahay wadanka Kuuriyada Koonfureed ayaa xiligan u muuqanaysa mid si weyn u qabsanaysa suuqyada aduunka ee aaladaha la xiriira technology-da, iyadoo haatan laga cabsi qabo inay daaqada kala baxdo shirkada Mareykanka laga leeyahay ee Apple oo dhawaan uu geeriyoodey ninkii maskaxda u ahaa oo lagu magacaabi jirey Steve Jobs.
Shirkada Samsung waxay degan tahay deegaanka lagu magacaabo Samsung Town ee magaalada Soul ee caasimada Kuuriyada Koonfureed waxaana la aasaasay sanadkii 1938-dii.
Halkan ka daalaco macluumaad dheeraad ah oo shirkada Samsung bogeeda ku daabacdey oo la xiriirta Tv-gan